ओस्टियोपैथी भनेको के हो | गठन र अध्ययन
मारिया जोस रोल्डन | 03/12/2021 11:24 | काम बन्द गर्नुहोस्
यद्यपि ओस्टियोपैथी शब्द धेरैलाई परिचित छ, सत्य यो हो कि सबैलाई थाहा छैन कि यो के हो र यो के को लागी प्रयोग गरिन्छ। ओस्टियोप्याथी एक प्राकृतिक प्रकारको उपचार हो जसले दुखाइ उत्पन्न गर्ने कारण वा कारण मार्फत दुखाइ कम गर्न खोज्छ। ओस्टियोपैथी जीवनभरको परम्परागत चिकित्सा विधिहरूबाट टाढा जान्छ, यसको नतिजाहरू धेरै सन्तोषजनक होस् भन्ने खोज्दै।
निम्न लेखमा हामी तपाईसँग ओस्टियोप्याथीको क्षेत्रको बारेमा थप विस्तृत रूपमा कुरा गर्न जाँदैछौं र यस प्राकृतिक उपचार को उद्देश्य को।
1 ओस्टियोपैथी भनेको के हो?
2 ओस्टियोपैथी को लाभ
3 ओस्टियोपैथले कुन प्रविधिहरू प्रयोग गर्छ
4 ओस्टियोपैथको काम
5 ओस्टियोपैथी र काइरोप्रैक्टिक बीचको भिन्नता
ओस्टियोपैथी भनेको के हो?
ओस्टियोप्याथी जीवन-लामो औषधिको लागि एक वैकल्पिक उपचार हो जुन सिद्धान्तमा काम गर्दछ कि सम्पूर्ण हड्डी संरचना प्रत्यक्ष रूपमा शरीरको कार्यहरूसँग जोडिएको छ। यसरी ओस्टियोपैथी वा ओस्टियोपैथका पेशेवरहरूले आफ्नो हात प्रयोग गर्छन्, बिरामीको पीडा कम गर्न र त्यो प्राप्त गर्न उक्त व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन्छ। ओस्टियोपैथले सिधै बिरामीको हड्डीको संरचनामा काम गर्छ, दुवै संरचनात्मक प्रणालीमा र आन्तरिक अंगहरूमा।
ओस्टियोपैथी को लाभ
ओस्टियोपैथी विशेष गरी निम्न विकार वा अवस्थाहरूको लागि संकेत गरिएको छ:
दुखाइ जसले सम्पूर्ण लोकोमोटर प्रणालीलाई असर गर्छ हड्डी, टेन्डन वा जोर्नीहरूको मामलामा जस्तै।
श्वसन प्रणाली को अवस्था जस्तै चिसो, फ्लू वा ब्रोन्काइटिस।
पाचन विकार जसरी कब्जियत, ग्यास वा छातीमा जलन हुन्छ।
मानसिक स्वास्थ्य विकारहरू जस्तै तनाव, अवसाद, वा चिन्ता।
बाल रोग अवस्था जस्तै निद्रा समस्या वा हाइपरएक्टिविटी।
ओस्टियोपैथले कुन प्रविधिहरू प्रयोग गर्छ
शरीरको भागमा निर्भर गर्दछ जसमा उसले काम गरिरहेको छ, ओस्टियोपैथले विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गर्नेछ:
संरचनात्मक प्रविधि विभिन्न रोगहरू सुधार गर्दा प्रयोग गरिन्छ जसले सामान्यतया हड्डी वा मांसपेशी जस्ता लोकोमोटर प्रणालीलाई असर गर्छ।
ओस्टियोपैथले प्रयोग गर्ने अर्को प्रविधि भिसेरल हो। यसको माध्यमबाट ओस्टियोपैथी मा पेशेवर हासिल गर्न खोज्छ शरीरको भिसेराको इष्टतम गतिशीलता र कार्य।
ओस्टियोपैथले प्रयोग गर्ने तेस्रो प्रविधि सेक्रल-क्रैनियल हो। यसको लागि धन्यवाद, सबै सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थको इष्टतम गतिशीलता प्राप्त हुन्छ, टाउको दुखाइ, चक्कर आना वा पाचन विकार जस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै।
धेरै मानिसहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् कि एक ओस्टियोपैथिक पेशेवरले निश्चित रोगलाई कम गर्न कति समय खर्च गर्नुपर्छ। सामान्यतया, एक ओस्टियोपैथले आफ्नो बिरामीसँग 90 मिनेट वा सो भन्दा बढी समय बिताउँछ, विशेष गरी पहिलो सत्रमा। एक राम्रो ओस्टियोपैथिक पेशेवरले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको सबैभन्दा राम्रो सम्भावित निदान गर्नु हो र त्यहाँबाट उसले उपयुक्त ठानेको प्रविधि लागू गर्नुहोस्। निम्न परामर्शहरूमा यो सामान्य छ कि पेशेवरले बिरामीको उपचार गर्न धेरै कम समय लिन्छ, यस्तो अवस्था वा विकारको कारण वा कारणमा आफूलाई सबै भन्दा माथि समर्पित गर्दै।
ओस्टियोपैथी र काइरोप्रैक्टिक बीचको भिन्नता
धेरै मानिसहरू अक्सर chiropractic को अभ्यास संग ओस्टियोपैथी थेरेपी भ्रमित गर्दछ। ओस्टियोपैथी को मामला मा, यो भनिन्छ कि यो एक प्राकृतिक र वैकल्पिक अभ्यास हो कि chiropractic भन्दा धेरै ठूलो क्षेत्र समाहित छ। यसरी, ओस्टियोपैथीले विभिन्न प्रविधिहरू समावेश गर्दछ जसको उद्देश्य मांसपेशी दुखाइ र दुखाइलाई सुधार गर्ने साथै शरीर र दिमाग बीचको पूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्ने हो।
chiropractic को मामला मा, यस प्रकार को प्रविधि धेरै धेरै गम्भीर दुखाइ मा केन्द्रित छ जुन पीठ वा हड्डी मा हुन्छ। काइरोप्रैक्टरले आफ्नो हातहरू प्रयोग गरेर त्यस्ता पीडाहरू कम गर्न प्रयास गर्न अगाडि बढ्छ, जस्तै कि यो ओस्टियोपैथी को मामला मा हुन्छ।
छोटकरीमा, ओस्टियोपैथी एक वैकल्पिक उपचारको रूपमा जुन परम्परागत चिकित्साको भाग हो यसको रक्षक र विरोधकर्ताहरू छन्। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले विभिन्न अवस्थाहरूको उपचार गर्दा जीवनभरको औषधिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यद्यपि, अधिक र अधिक मानिसहरू आफ्नो अवस्था र विकारहरू सुधार गर्न र यसरी इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि यस प्रकारको अभ्यासमा जाने निर्णय गर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » ओस्टियोपैथी भनेको के हो